မြန်မာကလေးများအတွက်လည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ ဂျပန်အဆိုတော် Ayaka Hirahara !! - JAPO Japanese News
လာ 24 Feb 2020, 14:57 ညနေ
ဂျပန်-မြန်မာပွဲတော်မှာ မိုရိဆာကီဝင်နဲ့အတူ moshimo သီချင်းကိုဆိုခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်ကတော့ Ayaka Hirahara ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေသလို ဒီနှစ်ထဲမှာလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအတွက် အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဂျပန်အဆိုတော် Ayaka Hirahara ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို သီချင်းရေးသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနစ် ၁၂ လပိုင်မှာ Jupiter ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ပွဲဦးထွက်လာပြီး၊ အဲ့ဒီသီချင်းကပဲ သူမကိုဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကျော်ကြားသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်-မြန်မာပွဲတော်မှာလည်း သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အတွက် မသိတဲ့သူမရှိလောက်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။
Ayaka Hirahara က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စပြီးသိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဂျပန်-မြန်မာပွဲတော်ကနေ အစပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထဆုံးပွဲထွက်ခဲ့တာကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ ပွဲတော်မှာစပွဲဦးထွက်လာပြီး ယခုနှစ် ၂၀၂၀ မှာလည်းစတိတ်စင်ပေါ်မှာ ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ရပါသေးတယ်နော်..
ဒါနဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ ပွဲတော်မှာသီဆိုခဲ့တဲ့ moshimo ဆိုတဲ့သီချင်းက မြန်မာလူမျိုးတွေကြား လျင်မြန်စွာနဲ့ပျံ့နှံ့သွားတာ အားလုံးလည်း သိကြပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။
မိုရိဆာကီဝင်းနဲ့ ၂ ယောက်အတူဆိုထားတဲ့သီချင်းက ၁ လပိုင်း ၁၄ ရက်နေ့ကနေစပြီး Facebook မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပြီး ၂ လပိုင်း ၂၁ ရက်နေ့အထိကြည့်ရှု့သူ ၃ သန်းနဲ့အထက်ရှိတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲတော်မှာ moshimo သီချင်းကိုနားမထောင်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက် video လေးကိုပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။
မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ သီဆိုတာသေချာပေါက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပေမဲ့၊ တကယ့်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်လိုပဲ သီဆိုနေတာအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်နော်။
ဒီတစ်ခေါက်ပွဲတော်ပြီးသွားတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့ သူ့မရဲ့ မြန်မာလူမျိုးပရိသတ်တွေများလာတယ်နော်！
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ Ayaka Hirahara က ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ပြုလုပ် နေပါတယ်။
(Ayaka Hirahara Jupiter ရန်ပုံငွေ)
ဒီရန်ပုံငွေက အနာဂတ်ကလေးတွေအတွက် သီချင်းဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကူညီမှုတွေ၊ အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်မယ်လို့ အဆိုတော် Ayaka Hirahara ကိုယ်တိုင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဒီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂ လပိုင်း ၁၉ ရက်နေ့ကလည်း တိုကျိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်မြင့်ထက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ 「 ၆ ကြိမ်မြောက် Ayaka Hirahara Jupiter ရန်ပုံငွေ My Best Friends Concert〜Good luck kids〜」ဆိုပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဖျော်ဖြေပွဲမှာ အထူးဧည့်သည်အနေနဲ့ မိုရိဆာကီဝင်းလည်းပဲ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Ayaka Hirahara နဲ့အတူ ၂ ယောက်သီချင်းကို သီဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ ငွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးဂေဟာ 「Dream Train」ဆီသို့လှူဒါန်းမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဖော်ပြချက်အရ Ayaka Hirahara က “ မိုရိဆာကီဝင်း နဲ့အတူတွဲပြီးဖျော်ဖြေရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း အတူတူဝမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ အခုကနေစပြီးတော့ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အပြုံးမျက်နှာတွေ ပိုပြီးမြင်လာရဖို့ ကြိုးစားသွားမယ်။ ပြီးတော့ ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်ကိုလည်း နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ လုပ်သွားမယ်” လို့ အားနဲ့အင်နဲ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းတွေနဲ့ အလုပ်များတဲ့ကြားက ဒီလိုရန်ပုံငွေအတွက် ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ပေးတာက အရမ်းကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်..
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဖျော်ဖြေမှုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့ Ayaka Hirahara ကို ချစ်ပြီးအားပေးရအောင်နော်!!!!
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး CrowdFunding Event ကျင်းပမယ် !
လယ်ကွင်းထဲမှာ ရွံ့လူးပြီးကစားရတဲ့ (ラグビー) ရာဂုဘီး အားကစား